Cunnooyinka Guryaha Ku Baxa - Xarunta Agabka iyo Naafada (ADRC)
In ka badan uun cunto!
Cuntada waxaa siiya mutadawiciin saaxiibo ah oo siiya dadka waa weyn ee guryaha kaqeyb gala ee Brown County.
Joog gurigaaga. Gooni isu taag
Ku raaxayso qad kulul, nafaqo leh nafaqada guriga!
Dadka la siinayo cunno waxay yiraahdaan waxay ka caawineysaa inay gurigooda ku sii noolaadaan.
Waxay ka badan tahay cunno oo keliya.
Qadada oo ay weheliso booqasho gaaban, hubin caafimaad, iyo isku xirka adeegyada kale iyo taageerada.
Miyaan xaq u leeyahay cunno *?
Waxaad u qalmi kartaa cuntada hadaad:
Da'da 60 ama ka weyn, inta badan guriga dibedda, oo aan awoodin inaad si ammaan ah u diyaariso cuntada kaligaa
Xaaska qof kale oo u qalma cuntada
Adult naafada ah oo la nool qof xaq u leh oo hela cunno
* Dadka qaangaarka ah ee ka yar da'da 60 way u qalmi karaan. Cunnooyinka lasiiyay qoysaska xannaanada qoyska ama codsadayaasha IRIS oo leh oggolaansho cunto. Fadlan soo wac.
Sidee ayaan u saxiixdo?
Wac ADRC (920) 448-4300 si aad ballan uga sameysato booqasho kugula kulanto gurigaaga.
Xirfadlayaashu waxay gudbin ku sameyn karaan arjiga khadka tooska ah: English or Spain
Maxaa qado ah?
Hoos udhaxayso liiska menus ee billaha ah.
Waxaan ku jiraa Daryeelka Qoyska / IRIS, ma la ii keeni karaa cuntooyin?
Cuntada waxaa la heli karaa iyagoo leh oggolaansho adeeg.
Kala shaqee Maareeyahaaga Daryeelahaaga / La-Taliyaha Daryeel si aad ugu dariso cuntada qorshahaaga daryeelka.
Mudo intee leeg ayaan quudin karaa?
Cunnooyinka waxaa lagu heli karaa waqti-dheer ama ku-meel-gaar ah iyadoo kuxiran baahidaada. Qaarkood waxay helaan cunto waqti-gaaban ah inta ay ka bogsanayaan jirro ama qalliin, halka daryeel-bixiye uu ka baxsan yahay magaalada, ama marka wadista baabuurku ka dhib badan yahay, sida xilliga qaboobaha.
Ama waxaad heli kartaa cunto waqti dheer ah, oo kaa caawinaysa inaad gurigaaga joogto si adiga ama daryeelahaagu u helaan hal cunto oo kayar oo aad wax uga iibsataan una diyaarisaan.
Goorma iyo halkee ayaa cuntada la geeyaa?
Bixinta cunnadu waa qiyaastii saacadda duhur waxaana laga heli karaa Isniinta - Jimcaha inta badan qaybaha Gobolka Brown, oo ay ku jiraan:
Qeybo ka mid ah Ashwaubenon
Suamico (Salaasada iyo Khamiista kaliya)
Wrightstown (Talaado iyo Khamiista kaliya)
Wac (920) 448-4300 si aad wax uga ogaato gaarsiinta aaggaaga.
Ma siin karaa quudkeyga qaaska ah?
Waxaan u adeegnaa cunto guud. Tag tan ADRC Iskuxirka Billaha si aad u aragto waxa qadada loo sameeyo.
Cunnooyinka qaaska ah ee cuntada (soodhiyamka-yar, maqaarka la beddelay, iyo cuntooyinka aan lahayn gluten) lama heli karo Si aad wax badan uga ogaato adeegyada baahiyaha cuntada gaarka ah, naga soo wac (920) 448-4300.
Cunnooyinka oo dhan waxay ka kooban yihiin hadhuudh, borotiin, 1% caano, ugu yaraan 3 jeer oo miro ah iyo / ama khudaar, iyo macmacaan maalmaha intiisa badan. Waxaan isku dayeynaa inaan xaddidno waxa ku jira soodhiyamka iyadoo aan lagu darin milix inta lagu jiro karinta, laakiin qaar ka mid ah walxaha la farsameeyay ayaa ku badnaan doona soodhiyamka.
Ma kharash baa jira?
Cunnooyinka waxaa loo heli karaa iyadoo lagu saleynayo tabarucaad macaamiisha xaqa u leh. Deeqda la soo jeediyey waa $ 4.00 halkii raashin. Deeqaha waa ikhtiyaari oo qarsoodi ah. Ka-qaybgale kasta oo u-qalma looma diidi doono cuntada iyadoo lagu saleynayo awooddooda inay wax ku darsadaan.
Ka-qaybgalayaasha FamilyCare ama ka-qaybgalayaasha IRIS ayaa heli kara cunnooyin la siiyo haddii lagu daro qorshahaaga daryeelka oo qaansheegad loogu diro Ururka Daryeelka Maareysan.
Sideen iskaga diiwaangeliyaa cuntada guriga lagu bixiyo?
Adiga ama daryeelahaaga ayaa naga soo wici kara (920) 448-4300 ama emayl bc.adrc.hbm@browncountywi.gov oo waxaan kuu qorsheyn doonaa booqasho aan kugula kulanno gurigaaga.
Codsiyada oo dhan waxay ku xiran yihiin dib u eegista shuruudaha u qalmida iyo marinka marinka.
Codsadeyaasha la ogolaaday waxay bilaabi karaan cunno yar uguyaraan labo maalmood.
Waan kuu baahanahay!
Ku raaxayso la shaqeynta dadka waaweyn?
Waxaa jira fursado mutadawiciin ah oo loogu talagalay baakadaha, u adeegida, iyo gaarsiinta cuntada.
Dabacsanaan si ay ugu haboonaato jadwalkaaga!
Wac (920) 448-4300 si aad wax dheeraad ah uga ogaato.